Mahagaga, saingy nahita an'i Bolivia aho, te-hiverina eto indray aho. Ity dia toerana malaza ho an'ny mpizaha tany amin'ny endrika rehetra. Andao hiezahantsika hahatakatra ny antony mahatonga izany.
Karazana fialam-boly any Bolivia
Bolivia dia firenena mahatalanjona iraisam-pirenena, tany afovoan-tany, tena voatokana ary tena mahafinaritra. Ny fialan-tsasatra any Bolivia dia hanome anao fihetseham-po tsara sy fahalalana vaovao, satria tsy fantatrao fa ny fiteny ofisialy eto amin'ity firenena ity dia 37, ary ny tenim-paritra eo an-toerana dia mbola betsaka kokoa.
Raha te hitsidika an'i Bolivia dia mila visa iray mialoha ny fandefasana vakansy mandritra ny fotoana fohy na any amin'ny sisintanin'ny firenena ny mponina ao Rosia sy ny firenena CIS, raha tsy manana olana amin'ny antontan-taratasy sy ny lalàna ianao.
Amin'ny tany, afaka miditra ao Bolivia ianao amin'ny iray amin'ireo firenena dimy misy azy - Brezila, Paraguay, Chile, Però ary Arzantina. Eto ny rafitra fitaterana dia mivoatra, indrindra fa ny fifandraisana amin'ny rivotra, any amin'ny seranam-piaramanidina maro no miasa. Ho an'ny lavitra lavitra, azonao ampiasaina ny serivisy fitaterana, saingy ny lalamby noho ny toerana sarotra eto dia tsy misy fitsipi-pinoana.
Avy amin'ny fomba fijery ny toetr'andro, dia tena samihafa tokoa ity firenena ity, koa miomàna mialoha amin'ny hoe ny sary avy amin'ny sisa any Bolivia dia ho maro, ary tena hafa mihitsy: avy amin'ny sehatra ho an'ny lanezy any an-tendrombohitra. Misy lohasahan'ireo lohasaha tendrombohitra, karazam-borona samihafa, raha tanàna lehibe sy tanàna kely kosa dia mety tsy mitovy amin'ny haavon'ny ranomasina, ary izany no mampiavaka azy ireo.
Ny fotoana malaza indrindra amin'ny fialan-tsasatra any Bolivia ho an'ny mpianatra dia nanomboka tamin'ny Septambra ka hatramin'ny Febroary, rehefa mihazona 30 + 34 degre ny mari-pahaizan'ny tany tropikaly. Amin'ny ririnina, ny mari-pana amin'ny antsasany dia +13 ... + 20 degre. Ny fisidinan'ny mpizahatany betsaka indrindra dia mitazana amin'ny vanim-potoana amin'ny volana Aogositra.
Bolivia dia tsy manana fahafahana miditra an-dranomasina, noho izany dia tsy tokony hanofy fialan-tsasatry ny torapasika ianao amin'ny fomba fahatsiarovany. Ny mpankafy fialam-boly amoron-dranomasina sy mpitsangatsanganana dia hanolotra fitsidihana any amoron'ny Farihin'i Titicaca na ireo vatom-borona manakaiky ny tanàna, izay tena betsaka ao amin'ny firenena.
Ao anatin'ity firenena mahagaga sy mahafinaritra ity, ny fotoana dia mitsambikimbikina tampoka, noho izany dia mamporisika izahay fa handamina mialoha mialoha ary hamangy toerana mahaliana. Ny lalana malaza sy ny fialam-boly malaza indrindra any Bolivia dia:
Mahafantatra ny toerana misy ny Andes, ny ranomandry, ny harambato, ny lanezy ary ny fandehanana any anaty lava-bato lava;
mitsidika ny Riandranon'i Arcoiris sy ny Rindrin'ny Dinôzôra , izay mitahiry ny sisa tavela amin'ireo zavamaniry sy biby an-jatony, ary koa ireo fozilisina ny tena dinosaures;
mandray na mankafy ny fialantsasatra mahafinaritra Indiana any an-toerana sy ny fety , ohatra, karnavaly any Copacabana sy Oruro ;
mpinamana amin'ny solontenan'ny flora sy ny biby any Bolivia, indrindra fa ity firenena ity dia anisan'ireo firenena folo manerantany miaraka amin'ny karazam-borona isan-karazany, biby mampinono ary biby mandady;
fianarana ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany sy ny haitao Epochs of Great Discoveries: hanomezana sary mahaliana be dia be toy izao ny fialantsasatra any Bolivia;
mitsidika ny Museum of Coca - manandrana ny zavamaniry, izay heverina ho "razambe" an'ny Coca-Cola amin'izao fotoana izao;
Ny fitsangatsanganana ara-tsakafo dia hanome gourmets ho an'ny tsiron-tsakafo vaovao: ny fifangaroan'ny fomban-drazana Espaniôla sy indiana dia mampiavaka ny lovam-pamokarana tsy azo tsapaina amin'ny tsiro;
Ny fiantsenana ao Bolivia dia karazam-pahalalana momba ny kolontsaina sy ny fomban-drazana avy amin'ny foko eo an-toerana sy ny fahatsiarovana ny tànana, indrindra ny vokatra vita amin'ny volon'ondry. Fantaro ny zavatra azon'i Bolivia ho fanomezana ho an'ny fianakaviana sy ny namana!
Torohevitra ho an'ny mpizaha tany
Sambany nisaintsaina momba ny fialan-tsasatra any Bolivia, eritrereto ireto zava-misy manaraka ireto:
Raha mikasa ny hivezivezy manerana ny firenena ianao ary handrakotra ny isan'ny atahorana betsaka indrindra mandritra ny fialan-tsasatrao, dia hitafy akanjo mafana ianao: any an-tendrombohitra dia mangatsiaka sy matevina foana;
Ny fitsidihana ny faritra avon'i Bolivia, indrindra indrindra ny La Paz , dia tsy maintsy manana lohan-doha sy solosaina tsara tarehy: misy ny tara-masoandro mahery vaika amin'ny UV.
Ireo Farihy ao Kolombia
Tools for clay polymer
California Rolls - recipe
Trendy Mody - Tranompokon'ny Lohataona-Spring-Summer 2016
Ity raim-pianakaviana ity dia nametraka ny sarin-janany teo amin'ny tanany. Ho gaga ianao raha mahita ny valiny!
Volo solika ho an'ny volo - fomba tsara indrindra ampiasaina amin'ny karazana volo rehetra
Ny andian-dahatsoratra "Helen sy ny ankizy" 25 taona: ny mpilalao ankafizinao indrindra amin'izao fotoana izao
Ahoana ny fomba hanasana hosotra?
Ny rhinitis mahavelona - ny antony sy ny fitsaboana
Fihetseham-po avy amin'ny hernia mahatsiravina
Calluses amin'ny tanana
Fivarotana trano fivarotana amin'ny fomba tsotra
Ny trondro encephalitis tselonina - soritr'aretina
Women's Turnovers New Balance
Modely vita amin'ny hoditra mody 2013
Ahoana ny fametrahana tantely?
Ahoana ny fomba ahandro sakafo ahitra avy amin'ny alika tranokely ao anaty fonon-tsakay?
Inona no azonao atao an-tsoratra amin'ny lehilahy?